दिलशोभा प्रकरण परोपकारी पत्रकारिताको चरम दुरुपयोग :: Press Chautari ::
दिलशोभा, आमाघर, यौनाचार र वालवालिका उद्धार । पछिल्लो २४ घण्टा नेपाली सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा चल्तीका शव्द भएका छन् । घर घर अनि सार्वजनिक भेटघाटमा पनि कुराको मेनु बनेकी छन्, दिलशोभा । दर्ता नै नभइ चलेको आमाघर र यसका नाममा गरिएको घिनौना यौनधन्दाको तहसम्मको खेतीका बारेमा जब खबर सार्वजनिक भयो । अहिले मानिसहरु चिउँडोमा हात राखेर सोच्न बाध्य भएका छन् , नेपाली मिडियाले कस्तोसम्म हावादारी खेती गर्दोरहेछ ? बुझ्दैनबुझी जनतालाई गुमराह राख्न कतिसम्मको गैरजिम्मेवार काम हुँदोरहेछ ? जनताको सुसूचित हुने अधिकारको कुरा गर्नेले कसरी जनतालाई गलत सूचना प्रवाह गरेर पत्रकारिताको विश्वसनियतामाथि नै दाग लगाउँदारहेछन् ? पत्रकारितामार्फत् बनाएको आफ्नो ब्राण्डको दुरुपयोग गर्दै परोपकारी पत्रकारिताको नाममा कति ठूलो भ्रम फिजाएर अपराध गरिएको रहेछ ? त्यसमा पनि नेपाली पत्रकारिताका बिग ब्रान्ड वियकुमार र रबीन्द्र मिश्रले गरेको पत्रकारिताले त सिंगो पत्रकारितालाई नै कुरीकुरी गरिरहेको छ । के अव पनि उनीहरुमा पत्रकारिताका नाममा उपदेश बोल्ने र लेख्ने नैतिक बल रहला त ?
हुन त अझै पनि दिलशोभामाथि लगाइएका संगीन आरोपहरुको पुष्टि भैसकेको छैन । तर, तथ्यहरुले प्रशस्तै धुँवा उडेको देखाइसकेका छन् । र, त्यो धुँवा उठेको धुरी खोज्दै जाँदा आमाघर नै भेटिएको छ । अब अगेनोमा आगो उनैले बालेकी हुन् भन्नेमा शंका छैन । तर, आगो बाल्नेको मात्र प्रश्न हैन, यस प्रकरणमा दाउरा जुटाउने नेपाली परोपकारी पत्रकारिता र त्यसका मुखियाहरु हरु पनि त्यतिकै दोषी छन् । प्रस्तुत पृष्ठभूमीमा नेपाली परोपकारी पत्रकारिता र त्यसलाई मलजल गर्ने जन्तस् जर्नालिज्मको भूमिकामाथि वहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
पत्रकारिताको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कुनै समय पत्रकारितामा सम्पादक जे ठान्छ, त्यही समाचार हो भन्ने पोटर्स थ्यौरीको साम्राज्य थियो । यो थ्यौरी विकसित पत्रकारिताको विश्व भूगोलबाट लगभग विस्थापित भैसक्यो । तर, नेपालमा भने यसको प्याराडाइममात्र सिफ्ट भएको स्थिति हो । र, यो थ्यौरी मालिक जे चाहन्छ, सम्पादक पनि त्यही चाहन्छ र त्यही नै समाचार बन्छ भन्ने नयाँ अवतारमा नेपालमा काम गरिरहेको छ । नेपालका ठूला मिडियागृहमा अहिले यही प्याराडाइममा अभ्यस्तहरुको सिन्डिकेट छ । यदाकदा वल्लो घरको नरे पल्लो घर सरे जस्तो हुन्छ । यसो गरेर घर सर्दासर्दै कहिले बास नपाउने स्थिति पनि बन्छ । तर, त्यतिबेला पनि पुरानै घरको थिंक पिस बनाइने विचित्रको चलन हुर्काइदैछ नेपालमा ।
नेपाली पत्रकारिताको ड्राइभिंग सिटमा या त पत्रकारिता नपढेका छन्, या त कुनै जमानामा पढे पनि अहिले अद्यावधिक गर्न बिर्सेकाहरु छन् । उनीहरुलाई के थाहा छैन भने पत्रकारिता सिद्धान्त पनि हो । यसमा दुरुस्त र छिटो गतिमा प्याराडाइम सिफ्ट भइरहेको हुन्छ । त्यो बुझ्नका लागि अध्ययन आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालमा यो विषय अध्ययन गर्नै पर्दैन, मालिक के चाहन्छ, त्यो विषयको हेक्का राखे पुग्छ । यो गणेशप्रभृतिमा अब्बल भएपछि अरुलाई पनि गणेश बनाएर नेपाली पत्रकारितामा जम्न सकिन्छ । नेपाली पत्रकारिताका ब्याकबेन्चरहरु अहिले यही आधारमा पत्रकारिताको सिन्डिकेट चलाइरहेका छन् ।
यही सिन्डिकेटमा नेपालमा परोपकारी पत्रकारिताको नयाँ अवतार गराइएको छ । आफूलाई मन पर्यो भने विषयको बारेमा यथेष्ट अनुसन्धान नै नगरी लम्पसार परेर हनुमान चालिसा गाउने र मन परेन भने धारेहात लगाएर सत्तोसराप गर्ने यो पत्रकारिताले रामलाई रावण र रावणलाई राम बनाएका धेरै दृष्टान्तहरु छन् यहाँ । पत्रकारिताका मात्र हैन, समाजका लव्ध प्रतिष्ठितहरु पनि हनुमान चालिसाका आधारमै ब्रान्ड एम्बेसडर हुने चलन छ । त्यो तयारीका लागि समाचार बन्न पाइने लोभको जंकी पत्रकारिताको पनि अहम् भूमिका बढिरहेको छ यहाँ ।
यो घाम जत्तिकै सत्य हो कि नेपाली पत्रकारितामा रवीन्द्र मिश्र र विजयकुमार ठूला ब्रान्ड हुन् । उनीहरुले बोल्दा, लेख्दा अब गफ हैन, कोटेसन बन्ने स्थिति छ । कुनै पनि व्यावसायिक व्यक्तिले आफ्नो क्षेत्रमा कमाउने सबैभन्दा ठूलो सम्पति भनेकै यही हो । तर, यो सम्पतिको धेरथोर दुरुपयोग गरेर परोपकारी पत्रकारिताको खेती गर्दा दिलशोभाजस्ता सहउत्पादन पनि हुदारहेछन् भन्ने सत्यवोध यी महाशयहरुमा हुन जरुरी छ । सत्य के हो भने, मन पर्यो भन्दैमा कसैलाई प्रशंसा गरेर भगवान बनाउन सकिदैन । अनि, मन परेन भनेर कसैलाई गाली गरेर राक्षस पनि बनाउन सकिदैन । हो, पत्रकारितामा उत्प्रेरणाको सन्दर्भमा यस्तो पत्रकारिता गर्न सकिन्छ । तर, त्योसँगै सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनका तीन चक्का पनि हुन्छन् पत्रकारितामा । त्यसको पनि हेक्का राख्न सक्नुपर्छ ।
नेपाली पत्रकारिताका यी धरोहर ब्राण्ड एकैदिनमा बनेका हैनन् । उनीहरुको लामो तपस्या, ठूलो त्याग र प्रविद्धता छ यहाँसम्म आउनुमा । उनीहरुप्रति नेपाली पत्रकारिताले गर्व गर्नुपर्छ । तर, यी ब्राण्डलाई पत्रकारितामा एबीसी मात्र हैन, अब त डीईएफ पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने सिकाएर भड्खालोमा पर्नबाट जोगाउन आवश्यक छ । त्यो काम पत्रकारिताका ब्याकबेन्चर सम्पादकहरुको हो तर उनीहरु कसैलाई खुशी पार्ने नाममा या विषयको ज्ञानको अभावमा त्यसो गर्ने साहस जुटाउँदैनन् । जसले गर्दा दिलशोभाजस्ता आदर्शहरु जन्माइन्छ जुन आदर्शमा नेपाली पत्रकारिताको विश्वसनियताको चिहान खनिएको हुन्छ । त्यसैले पनि जतिसक्दो चाँडो परोपकारी पत्रकारिताका आवरणमा हुने यस्तो भस्मासुर प्रवृतिबाट माथि उठ्नुपर्छ । यसको अर्थ यो पत्रकारिता आवश्यक छैन भनेको हैन, आवश्यक छ तर त्यसका लागि काँध थाप्नुअघि पर्याप्त अनुसन्धान जरुरी छ । त्यसो गर्न सकियो भने मात्र परोपकारी पत्रकारिताको अस्मिता जोगाउन सकिन्छ । हैन भने, यहाँ परोपकारी पत्रकारिताका नाममा हनुमान चालिसा पढ्ने र पढाउने काम मात्र हुन्छ । यसका लागि हनुमान त दोषी छन् नै, उनीहरुको आरति उतार्ने पोटर्स सम्पादक पनि त्यतिकै दोषी छन् । यसले समग्र पत्रकारिताको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न उठाउने भएकाले रमिता हेर्ने पनि दोषमुक्त हुँदैनन् ।
यसो भन्दा उनीहरु रिसाउँछन्, यो पनि थाहा छ । तर, त्यसो भन्दैमा पत्रकारिताका नाममा पत्रकारिताकै चीरहरण भैरहेको पत्रकारिताको विद्यार्थी हुनुको नाता टुलुटुलु हेरेर मात्र बसिरहन पनि त सकिदोरहेन छ । पत्रकारिताको इज्जतमा धावा बोल्दा त्यसको सामना गर्ने काम इतिहास या राजनीति पढेकाले गरिदिदैनन्, आमसञ्चार र पत्रकारिता पढेकाले नै गर्ने हो । कि कसो ? मैले जानेको यही हो, उनीहरुले अर्कै जानेका भए, त्यो उनीहरुकै कुरा भयो ।
प्रसंग दिलशोभा प्रकरणको हो । यो प्रकरणमा जसले जन्ती जर्नालिज्म गरे, गराए उनीहरुले बिना शर्त आफ्नो कमी कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ र परोपकारी पत्रकारिताका नाममा हनुमान चालिसा बन्द गर्नुपर्छ । किनकि, पत्रकारितामा मन पर्यो भनेर कसैलाई प्रशंसा गरेर भगवान बनाउन सकिदैन । अनि, मन परेन भनेर कसैलाई गाली गरेर राक्षस पनि बनाउन सकिदैन । हो, पत्रकारितामा उत्प्रेरणाको सन्दर्भमा यस्तो पत्रकारिता गर्न सकिन्छ । तर, त्यो बस्तुपरक हुनुपर्छ ।
बुधवार, २०७० फाल्गुन १४ गते १९:२५ / Wednesday, Feb 26, 2014 7:25 pm
sthaniya patrika, kalanki-ktm
dr. sab hajurko lekh padne mauka paiyo dherai khusi lageo chotoma vannu parda tapaiko lekhma aauta egoko vabana jhalkeko aavas vayo. dr sab journalist chena herne manche hainan ki ekpatak herdaima sabai kura clear hune. risani maf